भारतसम्म आइपुगेको सलहको समूह नेपाल आउँछ नै भन्ने यकिन छैन। - हेल्लो चितवन साप्ताहिक
भारतसम्म आइपुगेको सलहको समूह नेपाल आउँछ नै भन्ने यकिन छैन।
May 28, 2020 मा प्रकाशित (१ महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ९ मिनेट
मुलतः अफ्रिकाको रैथाने फट्याङ्ग्रा प्रजातिको किरा सलह (मरुभूमिमा पाइने) आहराको खोजीमा हजारौँ किलोमिटर पार गरेर भारतसम्म आइपुगेको छ । करोडौँको संख्यामा समूह बनाएर उड्ने र आफ्नो मार्गमा परेका सबै बालीहरु सखाप नै पार्ने गर्छन् ।
सलह पसेपछि किसानले बाली भित्र्याउन खेत पस्नै पाउँदैनन्, अर्थात केही पनि नछोडी पूरै खान्छन् । सलहका कारण खाद्य संकट उत्पन्न भएका उदहारण र चेतावनी संवद्ध निकायबाट आउने गरेको छ ।
अहिले सलह अफ्रिकाबाट समुद्र माथिबाटो हुँदै उडेर पाकिस्तानबाट भारतका विभिन्न क्षेत्रसम्म आइपुगेका छन् । राजस्थान, पञ्जाब, उत्तर प्रदेश हुँदै दिल्लीसम्म देखिएका छन् ।
आठ–दश लाखको समूहमा उड्ने सलह किसानका शत्रु हुन् । यो किरा फट्याङ्ग्रा समूहको किरा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको किट विज्ञान विभागका प्रमुख सह–प्राध्यापक डा. सुन्दर तिवारीले बताएका छन् ।
विशेष गरी गर्मी मौसममा सलहले आफ्नो वंश बिस्तार गर्ने उनले बताए । सलहको समूह १३० देखि १५० किलोमिटरप्रति दिनको गतिमा उड्ने गर्छन् । अहिलेको सलहले आनुवंशिक परिवर्तन गरेर उड्ने क्षमता बिस्तार गरेको देखिएको डा. तिवारीले बताए ।
बलौटे माटो र तातो या गर्मी ठाउँमा यसले आफ्नो वंश बिस्तार गर्ने गर्छ । सलहको जीवन चक्र मात्रै ९० दिनको हुन्छ । नयाँ स्थानमा सलहले आफ्नो वंश बिस्तार चाँडो गर्ने गर्छन् । डा. तिवारीले भने, ‘नयाँ ठाउँमा उनीहरुका लागि शत्रु तर किसानका लागि मित्र जीव कम हुन्छ । सोही कारण अति चाँडो उनीहरुको वंश बिस्तार हुन्छ ।’
एउटा सलहले एक दिनमा दुई ग्राम खान सक्ने डा. तिवारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसको अर्थ एउटा समूहमा ८–१० लाख सलह हुन्छन् । ती सबैले एक दिनमा ३५ हजार मानिसलाई पुग्ने खाद्यन्न सखाप पार्छन् ।’ सलहको एउटा समूहले एक मिलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्र ढाक्छन् । उप–प्राध्यापक तिवारीले भने, ‘सलह आएर बसेपछि सबै सखाप पार्छन् । खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौति उत्पन्न गर्न सक्छ ।’
नेपालमा सन् १९६० दशकमा सलहको प्रकोप देखिएको इतिहास छ । त्यसबेला किसानका बाली सखाप पारेको थियो ।
अहिले भारतसम्म आइपुगेका सलह विगतको भन्दा बढी सखाप पार्ने खालको रहेको देखिएको डा. तिवारीले जानकारी दिए ।
सलहको समूह दिल्लीबाट पूर्व तर्फ लागेकाले नेपालमा पनि आउन सक्ने सम्भावना देखिएकाले अध्यनन गरी सावधानीका लागि समन्वयात्मक उपाय अपनाउनका लागि कृषि मन्त्रालयले विशेष समिति नै बनाएको छ ।
मन्त्रालयले अध्ययनका लागि प्वान्टन क्वारेन्टाइन तथा विषादी केन्द्रका प्रमुख सहदेव हुमागाईँको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता रहेका खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य प्रविधि महाशाखाका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले भने, ‘भारतसम्म आएकाले नेपालमा पनि आउन सक्छ कि भन्ने चिन्ता देखिएको हो । हामीले विज्ञहरुसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ ।’
सामान्यतया असार–साउनमा विकास भएर भदौमा ठूलो मात्रामा देखिने भए पनि अहिले सलह बेमौसममा देखिएकाले विज्ञहरुसँग सल्लाह गरेर यसको जोखिम कस्तो रहन्छ भन्ने आँकलन गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
सलहको जोखिमका बारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का विज्ञसँग परामर्श लिने काम पनि भइरहेको प्रवक्ता केसीले बताएका छन् ।
विगतमा नेपालमा सलहको प्रकोप ठूलो मात्रामा परेको इतिहास रहे पनि पछिल्ला वर्षमा यस्तो अनुभव नरहेकाले सावधानीका लागि कस्ता उपायहरु अपनाउन सकिन्छ भन्ने बारे बुझ्नो काम भइरहेको उनले बताए ।
किट विज्ञानका सह–प्राध्यापक तिवारीले भने, ‘हामीले तत्कालका लागि गर्न सक्ने भनेको ट्रयाकिङ्ग र मोनिटरिङ्ग हो । अर्थात सलहको समूह पहिचान गरी मार्ग थाहा पाउनु र गर्न सकिने सावधानी अपनाउनु हो ।’ उनले भने, ‘नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ । भारतमा अश्रु ग्यास छर्कनेसम्म गरिएको देखिएको छ । यो कुरा चक्लाबन्दी प्रणालीमा खेती हुने ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ । तर हाम्रो जस्तोमा स–साना गह्रामा खेती हुने स्थानमा भने त्यो सम्भव हुँदैन । बरु थन्काउने बेला भएको बालीलाई चाँडो थन्काउने र सानो क्षेत्रमा रहेका करेसाबारीमा प्लाष्टिक वा झुलको बार लगाउने गर्न सकिन्छ ।’
विषादी हाल्नै परेमा एफएओको सिफारिस अनुसारको मालाथिन र फेनिट्रोथियन प्रयोग गर्न सकिने डा. तिवारीले बताए । उनका अनुसार यी विषादी प्रतिलिटर पानीमा एक एमएल राखेर छर्नु पर्छ । त्यसका लागि विशेष खालको स्प्रे चाहिने उनले बताए । विषादी हालेको १४ दिनसम्म खान हुँदैन ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक ऋषिराम कट्टेलका अनुसार सलहको जोखिम भएको क्षेत्रबाट खाद्यान्न आयात गरेमा त्यसको अनुवंश भित्रिएर फैलिने पनि सम्भावना हुन्छ । तर अहिले लकडाउनका कारण भारतबाट हुने आयात कम भएकाले सो जोखिम कम रहेको उनले बताए ।
नियन्त्रणका लागि ‘स्प्रीङ्कल एरिगेशन’ पनि विकल्प हुन सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘अमेरिकासहितका भारतमा पनि जहाजबाटै विषादी छरेको पनि देखिन्छ । तर हाम्रोमा त्यो सम्भावना छैन ।’
यसैगरी सलहलाई नै परिकारका रुपमा विकास गर्ने विकल्प पनि खाद्य सुरक्षाका लागि उपयुक्त हुने पछिल्लो समय चर्चामा रहेको र सलहमा प्रोटिन पाइने भएकाले त्यसका परिकार बउन पनि सकिने उनले बताए । ‘तर यसको सम्भावना पनि हाम्रोमा त्यति प्रभावकारी हुने देखिँदैन’ उनले भने ।
अहिले भारतसम्म आइपुगेको सलहको समूह नेपाल आउँछ नै भन्ने यकिन छैन । वायुको वेगसँग सापेक्ष भएर उड्ने भएकाले नेपाल प्रवेश गरेमा सम्भवतः प्रदेश नम्बर पाँचमा सबै भन्दा पहिले पुग्ने देखिएको छ ।